६ बर्षअघि मृ^ त^ क जीवन राइको मनै छुने कथा/बुबा रुदै आए मिडियामा/भिडियो हेर्दा कस्को मन रुदैन होला! (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
६ बर्षअघि मृ^ त^ क जीवन राइको मनै छुने कथा/बुबा रुदै आए मिडियामा/भिडियो हेर्दा कस्को मन रुदैन होला! (भिडियो सहित)
६ बर्ष पहिलेका मृ त क जीवन राइको जीवन कथा र सम्पुर्ण भित्री कहानी उनका ससुराले बताएका छन । अन्तर्वार्ताकै क्रममा निकै भावुक बनेर आँसु खसाल्दै उनले जिवनको कहानी सुनाउदा सबैको मन दुखेको छ । केही दिन पहिले मोरङको बेलबारिमा एकाएक सबै गाउँले बिरामी पर्दै आत्मा पसेर दुख दिन थालेपछि गाउँ नै चिन्तामा परेको खबरले देशभरी हल्ला फिजियो । करिब छ बर्ष अगाडी मृत्यु भएका जीवन राईको आत्मा हरेक बिरामीमा पसेर बोल्न थालेपछि गाउँ नै त्रसित बनेको भन्ने खबर धेरै मिडियामा आयो ।
गाउमा एकपछी अर्का मानिस बिरामी पर्दै मुर्छा पर्न थालेपछी झाक्रीले चिन्ता बस्न सुरु गरेर चार दिन चार रात नसुती धामी बसेर ढ्याङ्रो बजाएपछी अन्त्यमा छ बर्ष पहिले मोटरसाइकल दुर्घटनामा निधन भएका जीवन राईको चिहान खनेर हेर्नुपर्ने भनेर झाक्रीले भनेपछी सुरक्षाकर्मी र गाउले बुद्धिजिबि सहित करिब दुई सय मानिसहरुले रातको 12 बजे चिहान खनेर हेर्दा कसैले नसोचेको दृश्य देखिएपछी सबै गाउलेहरुले धामीलाई माफी मागेर सम्मान समेत गरेका थिए ।
गाउकै एकजना दिदिले आत्मा गाउलेमा पसेर टाउको फनफनी घुमाने र खुट्टा फनक्कै बटारिदिने र सुन्नै नसकिने क्रियाकलाप गर्ने बताइन । उनका कुरा सुन्दा अनि ६ बर्ष अगाडी मृत्यु भएका मान्छेको आत्माले यस्तोसम्म भनेको सुन्दा सबैलाई पत्याउन निकै गारो भएको थियो । झाक्रीले सबै कुरा निर्मुल पारेको बताएर सबै खुशी भएकै बेला आज अचानक जिवनका ससुरा बुबा मिडियामा आएर रुदै यस्तोसम्म सुनाए कि हेर्दा सबैको आँखा रसाउनेछ । झाक्रीले १२ बजे राति चिहान खनेर कसैले नसोचेको कुरा पत्ता लगाएका थिए । अन्ततः बुबा मिडियामा आएर सुरुदेखी आजसम्मको सम्पुर्ण नालीबेली र ६ बर्षपछि चिहान खन्नुको मुख्य कारण बताउदा सबै भावुक बने तलको भिडियोमा हेर्नुहोला आँखा रसाउनेछ |